GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Chineke si n’ọbọ mịpụta mma o ji asụ ndị mmadụ akwụ (1-17)
Eze Babịlọn ga-alụso Jeruselem agha (18-24)
A ga-anapụ onyeisi ọjọọ na-achị ndị Izrel ọchịchị (25-27)
‘Kpupụ okpueze ya’ (26)
“Ruo mgbe onye o ruuru bịara” (27)
A ga-eji mma agha gbuo ndị Amọn (28-32)
21 Jehova gwara m okwu ọzọ, sị: 2 “Nwa nke mmadụ, chee ihu na Jeruselem ma kwuo ihe a ga-eme ebe ndị dị nsọ, buokwa amụma ihe a ga-eme ndị Izrel. 3 Gwa ndị Izrel, sị, ‘Jehova sịrị: “M ga-eme unu ihe. M ga-amịpụta mma agha m n’ọbọ,+ gbuo ma onye ezi omume ma onye ajọ omume. 4 M ga-amịpụta mma agha m n’ọbọ, jiri ya gbuo mmadụ* niile, malite n’ebe ndịda ruo n’ebe ugwu. M ga-egbu ma onye ezi omume ma onye ajọ omume. 5 Mmadụ* niile ga-amarakwa na mụnwa, bụ́ Jehova, amịpụtala mma agha m n’ọbọ ya. M gaghịkwa amịghachi ya.”’+ 6 “Ma gịnwa, bụ́ nwa nke mmadụ, sụọ ude ka onye ụjọ ji.* Nọrọ n’ihu ha sụọ ude ka onye obi na-adịghị mma.+ 7 Ọ bụrụkwa na ha asị gị, ‘Gịnị mere i ji na-asụ ude?’ ị ga-asị ha, ‘Ọ bụ n’ihi ozi a ga-ezite.’ N’ihi na ihe ahụ unu nụrụ ga-emezurịrị. Obi ga-awụnyekwa onye ọ bụla n’afọ. Aka niile ga-akụda. Onye ọ bụla ga-ada mbà. Ikpere niile ga-agụsịkwa mmiri.*+ ‘N’eziokwu, ihe ahụ unu nụrụ ga-emezurịrị.’ Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru ihe a.” 8 Jehova gwakwara m okwu ọzọ, sị: 9 “Nwa nke mmadụ, buo amụma, sị, ‘Jehova sịrị: ‘Mma agha, a mụọla mma agha!+ Ọ na-egbuzi maramara. 10 A mụrụ ya ka e jiri ya gbuo ọtụtụ mmadụ. A mụrụ ya ka ọ na-egbu ka àmụ̀mà.’”’” “Ọ̀ bụ na anyị ekwesịghị ịṅụrịwa ọṅụ?” “‘Ọ̀* ga-ajụ mkpanaka nwa m+ otú ọ na-ajụ osisi niile? 11 “‘E nyere mmadụ mma agha a ka o mee ka ọ na-egbu maramara, ka e jirikwa ya na-egbu ndị mmadụ. A mụọla ya, ya ana-egbu maramara. A ga-enyekwa ya onye na-egbu mmadụ.+ 12 “‘Nwa nke mmadụ, bee ákwá, tiekwa mkpu ákwá,+ n’ihi na e ji mma agha ahụ na-egbu ndị m. E jikwa ya na-egbu ndị isi niile n’Izrel.+ A ga-eji ya gbuo ndị a niile, ha na ndị m. N’ihi ya, tie aka n’apata ụkwụ ka onye ihe na-ewute. 13 E nyochaala ndị m.+ Gịnịkwa ga-eme ma ọ bụrụ na mma agha ahụ ajụ mkpanaka eze? Ọ gaghị adịgide.’*+ Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru ihe a. 14 “Ma gịnwa, bụ́ nwa nke mmadụ, buo amụma, kụọkwa aka,* kwuo ‘Mma agha!’ ugboro atọ. Ọ bụ mma agha e ji gbuo ndị mmadụ. Ọ bụ mma agha nke gbara ọtụtụ ndị gburugburu,+ nke e jikwa gbuo ha. 15 Obi ga-awụnye ndị mmadụ n’afọ.+ Ọtụtụ ndị ga-adakwa n’ọnụ ụzọ ámá ha. M ga-eji mma agha gbuo ndị mmadụ. N’eziokwu, ọ na-egbu ka àmụ̀mà. A mụrụ ya amụ ka e jiri ya gbuo ndị mmadụ. 16 Gosi na ị dị nkọ, gburukwa gaa n’aka nri nakwa n’aka ekpe. Gaa ebe ọ bụla e chere gị ihu. 17 M ga-ejikwa iwe kụọ aka ma taa ndị mejọrọ m ahụhụ ka iwe m dajụọ.+ Ọ bụ mụnwa, bụ́ Jehova, kwuru ihe a.” 18 Jehova gwakwara m okwu ọzọ, sị: 19 “Nwa nke mmadụ, see otu ụzọ si n’otu obodo pụta, nke nwere ebe o ruru gbaa abụọ. Eze Babịlọn, onye ji mma agha na-abịa, ga-ahọrọ ụzọ nke ọ ga-esi n’ime ha abụọ. N’ebe ụzọ a gbara abụọ, senye ihe* ga na-egosi ebe e si abanye n’obodo abụọ ahụ. 20 Ị ga-esenyekwa ihe ga-egosi ụzọ a ga-esi jiri mma agha bata ma lụso Raba,+ bụ́ obodo ndị Amọn agha, nakwa ụzọ a ga-esi bata Jeruselem, bụ́ ebe a rụsiri ike,+ nke dị na Juda, ma lụso ya agha. 21 N’ihi na eze Babịlọn ga-akwụsị otu ebe ụzọ gbara mkpị, n’isi ụzọ abụọ ahụ, ka ọ gbaa afa. Ọ ga-ayọgharị akụ́. Ọ ga-ajụ arụsị* ya ase. Ọ ga-elerukwa imeju anụ anya. 22 Afa o ji aka nri ya gbaa gosiri na ha kwesịrị ịga Jeruselem, gaa busa ihe e ji akwatu mgbidi, kwuo ka e gbuo ndị mmadụ, tie mkpu agha, busakwa ihe a ga-eji kwatuo ọnụ ụzọ ámá, jiri ájá rụọ mgbidi, rụọkwa mgbidi ọ ga-eji nọchibido ya.+ 23 Ma, ndị* ṅụụrụ ha iyi ga-eche na ihe ahụ ọ gbatara n’afa agaghị eme.+ Ọ* ga-echetakwa ihe ndị ha mere ma dọrọ ha n’agha.+ 24 “N’ihi ya, Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova sịrị: ‘Unu emeela ka e cheta mmehie unu, n’ihi na unu gbara mmehie unu n’anwụ, meekwa ka a hụ na naanị ihe unu na-eme bụ mmehie. Ebe ọ bụ na e chetala unu, a ga-akpụrụ unu n’ike.’* 25 “Ma gịnwa, bụ́ onyeisi Izrel, onye ọjọọ e merụrụ ezigbo ahụ́, oge gị eruola,+ ya bụ, oge a ga-ata gị ahụhụ ikpeazụ. 26 Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova sịrị: ‘Wepụ ákwà ahụ e kere ya n’isi, kpupụkwa okpueze ya.+ Ihe agaghịzi adị otú ọ dịbu.+ Ka e bulie onye dị ala elu,+ ma wetuo onye dị elu ala.+ 27 Mbibi, mbibi, mbibi ka m ga-ebibi ya. Ọ gaghịkwa abụ nke onye ọ bụla ruo mgbe onye o ruuru bịara.+ M ga-ewerekwa ya nye ya.’+ 28 “Ma gịnwa, bụ́ nwa nke mmadụ, buo amụma, sị, ‘E nwere ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru banyere ụmụ Amọn nakwa banyere mkparị ha na-akparị ndị ya.’ Kwuokwa sị, ‘Mma agha! A mịpụtara mma agha iji gbuo ndị mmadụ. A mụrụ ya amụ ka e jiri ya gbuo ndị mmadụ. Ọ na-egbukwa ka àmụ̀mà. 29 N’agbanyeghị na ha na-ahụrụ gị ọhụụ ụgha, n’agbanyeghịkwa na afa ha na-agbara gị bụ iji duhie gị, a ga-atụkwasị gị n’elu ebe e bukọtara ozu ndị ọjọọ e gburu egbu, ndị oge ha zuru, ya bụ, oge a ga-ata ha ahụhụ ikpeazụ. 30 Mịghachi mma agha ahụ n’ọbọ ya. M ga-ekpe gị ikpe n’ebe a mụrụ* gị, ya bụ, n’obodo gị. 31 M ga-eji iwe taa gị ahụhụ. Iwe m ga-adị ọkụ, reekwa gị ka ọkụ. M ga-enyefekwa gị n’aka ndị obi fere azụ, ndị ma ka e si ebibi ihe.+ 32 Ị ga-aghọ nkụ e ji akwanye ọkụ.+ Ọbara gị ga na-asọ n’ala gị. A gaghịkwa echeta gị, n’ihi na mụnwa, bụ́ Jehova, ekwuola ya.’”
^ Na Hibru, “mgbe úkwù na-ama gị jijiji.”
^ Ya bụ, ha ga-aba mamịrị ọkụ.
^ Ya bụ, mma agha Jehova.
^ Ma ọ bụ “Mkpanaka a agaghị adịgide.”
^ Aka ọ ga-akụ bụ iji gosi na iwe ji ya.
^ Na Hibru, “aka.”
^ Ya bụ, ndị bi na Jeruselem.
^ Ya bụ, Eze Babịlọn.
^ Na Hibru, “aka ga-akpara unu.”
^ Na Hibru, “e kere.”